निकै बेर सम्म ढोका बन्द थियो ……बास्तबिक थाहा पाएपछी सबैको होस् उड्यो ! | समाचार
निकै बेर सम्म ढोका बन्द थियो ……बास्तबिक थाहा पाएपछी सबैको होस् उड्यो !
November 4, 2021 NepstokLeaveaComment on निकै बेर सम्म ढोका बन्द थियो ……बास्तबिक थाहा पाएपछी सबैको होस् उड्यो !
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालका कारण धेरै किशोर किशोरीले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा पा’सो ला’गा’ए’को अभिनय गर्दा यस्तै एक घटना भएको छ । १२ वर्षीया किशोरीले सेल्फी लिने क्रममा ज्यान गुमाएकी छिन्। उनि कुर्सीमा उभिएकी थिइन र पा’सो ग’ला’मा ल’गा’एर से’ल्फी लि’ई’रहेकी थिइन्।
यस समयमा उनको दिमागि सन्तुलन बिग्रेको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना भारतको इन्दौरको माँ वैष्णोदेवी नगरसँग सम्बन्धित छ। पुलिसले मृतकको परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था पठाएको छ र यस घटनाको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिए छ। दुर्घटनाको क्रममा केटीको बुबा घरमा थिए भनेर पुलिसले जनाएको छ।
जब केटी लामो समय कोठा बाहिर निस्केकी थिइनन्, त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू उनको कोठामा गए र घटनाको बास्तविकता थाहा पाए। नातेदारहरु डराए, परिवारले छिमेकीहरूलाई बोलाए र केटीलाई तल ल्याएर प्रहरीलाई जानकारी दिए ।